China abicah imitya mveliso kunye nabenzi | SJJ
Izinto ze-silicone azithambisi nje kwaye zihlala ixesha elide, ikomelele kwaye ilungile kwi-ductility kunye nokuthamba. Iibhanti ezininzi ze-silicone zisetyenziswe ngokufuthi kubomi bethu, njengeentambo zokubuyela umva ngefowuni, ii-lanyards ze-silicone, izihlangu zesilicone, iibhendi zesilic njalo njalo. Imitya ye-silicone yomelele kwaye ibhityile ...
Izinto ze-silicone azithambisi nje kwaye zihlala ixesha elide, ikomelele kwaye ilungile kwi-ductility kunye nokuthamba. Iibhanti ezininzi ze-silicone zisetyenziswe ngokufuthi kubomi bethu, njengeentambo zokubuyela umva ngefowuni, ii-lanyards ze-silicone, izihlangu zesilicone, iibhendi zesilic njalo njalo. Imitya ye-silicone yomelele kwaye ibhityile, zibamba izinto ngokuqinileyo ngamandla e-elastic. Iimpawu zinokuprintwa, zibhalwe okanye zifakwe kumbala ogqityiweyo kwimizimba yemicu ye-silicone, nayo inokwenziwa kwezinye iithegi ze-silicone okanye i-PVC emva koko zidibanise kwimitya ye-silicone ukubonisa izimvo kunye neengcinga zakho. Imitya ye-silicone yenziwa nokuba yenziwe kunye nezinto ezibengezelayo okanye izibane ezikhanyayo ukuba zibe nomtsalane ngakumbi kwaye zithandeke. Indibaniselwano yenza imitya yesilicone isebenze ngakumbi kwaye ikhethe ukunyuselwa, ishishini, izipho, amaqela, ezemidlalo, izikolo kunye nezinye iinjongo.
Iimathiriyeli: Abicah kunye nabanye
Uyilo kunye nobukhulu: Ukuhlawulwa simahla kwentlawulelo yoyilo lwethu esele sikho, uyilo olwenziwe ngokwezifiso
IiLogo: IiLogo zinokuprintwa, zifakwe ebhodini okanye zifakwe umbala ngombala ozalisiweyo
Egqithileyo Iiwindow zeSilicone Cable
Okulandelayo: Iikomityi zeSilicone ezisongelayo
Ubunzima bePhepha kunye ne-Coin Embed
Inqanaba leBhari / Inqanaba leMikhosi iBar / Inqanaba lomkhosi / ...